५ लाख गरीब घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण : कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन « Sajhapath.com
काठमाडौं,कात्तिक ५ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब दशैंअघि नै वितरण गर्ने सरकारी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
यसका लागि कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । गरीब घरपरिवार कस्तालाई भन्ने, त्यसको यकिन तथ्यांकबारे कार्यविधिले स्पष्ट पार्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई पास गर्न सकेन ।
करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्याए पनि दशैं सकिएको १ हप्तासम्म सरकारले कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन ।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा ताजा तथ्यांकमा आधारित भएर मात्रै रकम बाँड्नुपर्ने अर्थात् कोभिडबाट सृजित गरीबीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि आउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले पेश गरेको कार्यविधिलाई स्वीकृत भएको छैन ।
यस्तो रकम सरकारले अघिल्लो वर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्याे । तर, यो दशैंमा दिने भनेर घोषणा गरे पनि नदिनुले गरीबमाथि झन् ठूलो आघात पुगेको उनको बुझाइ छ । बजेट कार्यक्रमै ५ लाख भनिनु नै गलत भएको र यसको मापदण्ड बनाएर रकम वितरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । आर्थिक अभियानबाट